मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् यी कुरा - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् यी कुरा
मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् यी कुरा
मोटरसाइकल चलाउने चालकले सामान्य कुरामा ध्यान नपु¥याउँदा पनि मोटरसाइकलमा ठूलो क्षति पुग्ने गर्छ । जसले पैसा र समयको नोक्सानी दिन्छ । त्यसैले मोटरसाइकल चलाउँदा लापरवाही गर्नु हुँदैन ।
सामाखुसीमा पछिल्लो १८ वर्षदेखि मोटरसाइकल बनाउँदै आएका ५० वर्षीय शिव आले सामान्यतया मोटरसाइकल चलाउनेको लापरवाहीले नै मोटरसाइकलमा क्षति पुग्ने बताउँछन् । सामान्यतया मोटरसाइकल चलाउँदा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु निम्नानुसार छन् ।
मोटरसाइकल बिग्रने मुख्य कारणहरु
मोटरसाइकलमा सामान्य समस्याहरु नियमित आइरहन्छन् । सानो समस्यालाई ख्याल नगर्दा ठूला समस्याहरु निम्तिने सम्भावना हुन्छन् । धेरै मोटरसाइकलमा सामान्यतया देखिइरहने समस्या भनेको मोटरसाइकलको स्टार्ट नहुनु हो । यस्तो समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भनेको चलाउन नजानेको मान्छेलाई चलाउन दिनु हो । यसमा मोटरसाइकल नयाँ छ कि पुरानो, कुन कम्पनीको हो ? नियमित सर्भिसिङ गरेको छ कि छैन ? भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।
मोटरसाइकल स्टार्ट नहुने समस्या हुँदा के गर्ने ?
मोटरसाइकलमा सबैभन्दा धेरै देखिने समस्या भनेको स्टार्ट नहुने समस्या हो । यो समस्या धेरै दिन नचलाई राख्दा पनि निम्तिन सक्छ । धेरै बेर बिना रोकावट मोटरसाइकल चलाइरहँदा इन्जिन धेरै तातेर पनि स्टार्ट नहुने समस्या देखिन सक्छ । मबिल सकियो भने पनि समस्या सिर्जना हुन्छ । मोटरसाइकलको चोक तानेर हिँडेको छ भने पनि एक्सिलेटर बन्द गर्दा स्टार्ट बन्द हुने वा स्टार्ट नहुने समस्या निम्तिन सक्छ । यसबाहेक पनि बाइक लड्दा, इन्जिनमा तेल प्रसार नहुँदा पनि स्टार्ट नहुने वा बन्द हुने समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
यस्तो समस्या हुँदा सबैभन्दा पहिले प्लक चेक गर्नुपर्छ । त्यसपछि तेल पास भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसपछि फायरिङ आएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसपछि चाबी बन्द गरेर अन गर्नुपर्छ । ब्याट्रिको अवस्था कस्तो छ ? हेर्नुपर्छ । लामो समय मोटरसाइकल स्टार्ट नगर्दा मुसाले तार काटेर पनि स्टार्ट नभएको हुन सक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । मोटरसाइकल स्टार्ट भएन भने यी विधिबाट स्टार्ट गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ ।
मोटरसाइकल चालकले ध्यानदिनुपर्ने कुराहरु के–के हुन्
मोटरसाइकल चालकले सामान्य सम्झिने कतिपय समस्याहरु ठूला समस्याको कारक बन्न सक्छन् । त्यसैले निम्न कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
–मोटरसाइकलको कुनै भागको नट खुस्किएको छ भने त्यसलाई मर्मत गरिहाल्ने
–बेलाबेलामा मबिल चेक गर्ने
–सकेसम्म रिजर्भमा नकुदाउने
–कम्तीमा १२०० देखि बढीमा १५०० किलोमिटर कुदेपछि अनिवार्य सर्भिसिङ गर्ने
–हावा, साइडलाइट र मोटरसाइकलको आन्तरिक सिस्टमको निगरानी गरिराख्ने ।
–अलिकति धुवाँ फाल्यो भने किन फाल्यो भनेर वर्कसपमा गएर चेक गराउने
–सामान्यभन्दा भिन्न आवाज आयो भने वर्कसपमा गएर चेक गराइहाल्ने गर्नुपर्छ ।
मोबिल फर्ने बेला भए-नभएको कसरी थाहा पाउने ?
मोबिल फेर्ने बेला भए नभएको हामीले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । एउटा त ५÷७ दिनको अन्तरालमा कति मोबिल घटेको छ ? भन्ने आधारमा यो यकिन गर्न सकिन्छ । अर्काे मोबिल कति पातलो र बाक्लो छ, कालो छ कि छैन भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । जस्तो मबिल धेरै कालो भएको छ भने त्यो फेर्ने बेला भयो भन्ने हुन्छ । यो इन्जिन बिग्रिएको संकेत पनि हो । तर कहिलेकाहीँ भने नजानेको मान्छेलाई मोटरसाइकल चलाउन दियो भने आधा घण्टामै मोबिल सकिने गरी चलाउन पनि सक्छन् । माथि उल्लेखित शर्त भने नियमित चलाउने चालकको हकमा लागु हुन्छ ।
मोटरसाइकल चलाउने बेलामा इन्जिनको सुरक्षाको ध्यान दिइएन भने चल्दाचल्दै मोटरसाइकल गुड्दै नगुड्ने गरी बन्द हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ इन्जिन फेर्ने बेला भएको मोटरसाइकल समयमा नफेर्दा चल्दैनचल्नेगरी बन्द पनि हुन सक्छ । त्यसैले इन्जिन फेर्ने बेला भएको मोटरसाइकल कामचलाउ पारामा धेरै चलाउन हुँदैन । सामान्यतया मोटरसाइकलको इन्जिनको सुरक्षाको लागि निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ः
–मोटरसाइकलमा क्षमताभन्दा बढी मान्छे बोल्नुहुँदैन ।
–मोटरसाइकल चलाउँदा खाल्डो जोगाउनु पर्छ ।
–धेरै गह्रुँगो सामान बोक्नु हुँदैन वा इन्जिनलाई धेरै भारी बनाउनु हुँदैन ।
– उकालोमा धेरै पिकअप नभएको जस्तो महसुस भयो भने तुरुन्त चेक गराइहाल्नु पर्छ ।
– समय पुगेपछि सर्भिसिङ, मबिल र फिल्टर फेर्ने काम एकैपटक गर्दा हुन्छ ।
इन्जिनको स्थिति कसरी थाहा पाउने ?
मोटरसाइकलको इन्जिन बनाउने बेला भए नभएको थाहा पाउने तरिका
–नियमित सेतो धुवाँको मुस्लो निस्किएको छ कि छैन हेर्ने । यदि धुवाँको मुस्लो निस्किएको छ भने इन्जिन खोल्ने बेला भएको मान्न सकिन्छ ।
– उकालोमा २ जना मात्रै चढ्दा पनि अस्वाभाविक धुवाँको मुस्लो फाल्यो भने पनि इन्जिन फेर्ने बेला भयो भन्ने थाहा हुन्छ ।
२-३ दिनमै मबिल पनि सकिन्छ ।
–साइलेन्सरमा चिल्लो कालो मबिल देखिनु
– उकालोमा वा तेर्साेमा पनि भिन्न खालको आवाज आउनु पनि इन्जिन बिग्रिनुको संकेत हो ।